2014 Holiday Social Media Marketing Trends | Martech Zone
2014 Holiday Social Media Marketing Trends
Satọde, Satọdee 27, 2014 Sọnde, Septemba 28, 2014 Douglas Karr
Ọ dị ka nke a ga-abụ nnukwu oge ezumike maka Facebook, ebee 92% nke ndị ahịa na-atụ anya na-emefu ọtụtụ n'ime ha na-elekọta mmadụ ahịa mmefu ego! Na mkpokọta, a na-atụ anya na ndị na-azụ ahịa ga-eji 8% karịa afọ a karịa ka ha mere n'afọ gara aga - ijeri $ 650. Ndị ahịa na-elekwa mmekọrịta mmadụ anya dị ka isi iyi iji gbasaa ahịa ha!
Oge ezumike ezumike nke 2014 abiala ebe a! Ọ bụrụ n’ịdị ka anyị, ị nọworị na-aga n’ihu ime atụmatụ ezumike ezumike gị. Ya mere, gịnị ma ị laghachite ma nyochaa ihe ndị ahịa ndị ọzọ na-eche maka oge ezumike a na mmekọrịta mmadụ na ibe ya? Mụta ebe ndị ahịa na-etinye ego, netwọkụ ndị na-abata dị ka ndị na-egwu ike, ihe ebumnuche bụ isi nke ndị ahịa bụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Rob Manning, Nye
Offerpop na-eji ihe omuma ihe omuma a eme ihe omuma imehe ohuru ebe ndi ahia nwere ike debanye aha ma nweta oge nkwuputa ahia nke oge na igbe mbata gi. Usoro ihe eji eme ihe n’efu gha enye ihe dijital na nke ndi mmadu banyere ihe ichoro ima maka Black Friday na gafee. Nweta infographics, akụkọ nyocha, atụmatụ azụmaahịa, lee akwụkwọ, na ndị ọzọ, afọ niile.
Tags: atụmatụ dijitalụ marektingahia ecommercenyocha ecommerceemail ndụmọdụezumike Atụmatụemume ezumikeenye onyinyezuru manningndụmọdụ mgbasa ozi mgbasa ozindụmọdụ gbasara mmadụ
Ọdịnihu nke Martech
Kedu ka ndị ahịa si dị ka ị na-ahọpụta ndị na-eweta ahịa akpaaka?